ရန်သူသည်ကျူးကျော်ရပ်တန့်ဖို့ကာကွယ်ရေးတာဝါတိုင်တည်ဆောက်။ သူတို့ကလမ်း၏အဆုံးကိုရောက်ရှိအလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌ရန်သူယူနစ်ကိုဖွိုဖကျြ။ သူတို့သည်သင်၏ကာကွယ်ရေးရှောက်သွားလိုလျှင်သင်ဘဝချွတ်ပါလိမ့်မယ်။
Warzone နည်းပညာမြင့်လက်နက်များနှင့်အမျိုးမျိုးရှုခင်းများနှင့်အတူကြီးမားတဲ့ပွင့်လင်းမြေပုံ featuring တစ်ဦးရဲတိုက်ကာကွယ်ရေးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်း၏ရည်မှန်းချက်ရိုးရိုးတတ်နိုင်သမျှရှည်စွာဆက်လက်ရှင်သန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အသစ်တစ်ခုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ရရှိနိုင်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောဂိမ်း Modes သာလည်းရှိပါတယ်
သင့်အနေဖြင့်အနီရောင်ကစားသမားဖြစ်ကြသည်။ (ကြားနေရဲတိုက်မီးခိုးရောင်ဖြစ်ကြသည်) အပေါငျးတို့သညျရနျသူရဲတိုက်ကိုကျော်ယူပါ။ ကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့်သင်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ချင်သောရဲတိုက်မှဆွဲယူပါ။ ဒီအစာရှောင်-paced မဟာဗျူဟာဂိမ်းအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီး!
သင့်ရဲ့မျှော်စင်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့်ရန်သူစစ်သားတွေ, တင့်ကား, စက်လှေများနှင့်လေယာဉ်များဆန့်ကျင်ခုခံကာကွယ်ဖို့ထွက်နေတဲ့တည်ဆောက်။
ရုံ tds shoot
အဆင့်မြှင့်, ကျွမ်းကျင်မှု, သေနတ်တွေအများကြီးနှင့်အတူထိပ်တန်း-Down အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုသေနတ်သမား။
ပင်ဂွင်းငှက်များ td2တိုက်ခိုက်ရန်လာသောအခါ
ဒါကမူရင်း Penguins တိုက်ခိုက် TD ဂိမ်းဖို့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပါတယ်။ ကစားသမားများပင်ဂွင်းငှက်များနှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ရေးတာဝါတိုင်ဖျက်ဆီးနေဖြင့်အတွေ့အကြုံအချက်များဆော; တစ်ဦးချင်းစီအဆင့်ကိုတက်နှင့်အတူ, သူတို့ကထိုကဲ့သို့သောအပိုစတင်ငွေသားသို့မဟုတ်အသစ်တာဝါတိုင်အဖြစ်အခွင့်အရေးကိုရရှိနိုင်သည်။
ပင်ဂွင်းငှက်များကို td3တိုက်ခိုက်
အဆိုပါပင်ဂွင်းငှက်များအတွက်ချီတက်နေကြပါတယ်။ သူတို့ကမှန်သင့်ရပ်ကွက်ကတဆင့်သွားကြသည်နှင့်ကသူတို့ကိုရပ်တန့်ဖို့အချိန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့လက်နက်တွေခြင်းအားဖြင့်ပညာရှိရှိ။
ပင်ဂွင်းငှက်များကို td တိုက်ခိုက်သည့်အခါ
နာမည်ကျော်မျှော်စင်ကာကွယ်ရေးဂိမ်းကျိန်အပ်သောရတနာများအတွက်အဆင့် pack ကို။ အ orcs, နတ်ဆိုးများနှင့်မှာတော့ဖုတ်ကောင်များ၏ဘေးဥပဒ် overlord အဖြစ်အခန်းကဏ္ဍအပေါ် ယူ. ဖြောင့်မတ်သူရဲကောင်းများအားဖြင့်ခိုးယူခံရထံမှသင်တို့ကျောက်မျက်ကာကွယ်
သင်သည်သင်၏ထွက်နေတဲ့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့်အသက်ရှင်လျှက်နေဖို့အဖြစ် 50 ဦးအဆင့်ဆင့်ပေါ်မှာဖုတ်ကောင်အလုံးအရင်းအနိုင်ယူ!
တစ်လှည့်ကွက်နှင့်အတူတစ်ဦးကရဲတိုက်ကိုကာကွယ်ရေး, ကယ်တင်ရှင် Kailgerwrath ၏အလုံးအရင်းဆန့်ကျင်အလင်း၏နိုင်ငံခုခံကာကွယ်ရန်သင့်ရုန်းကန်များ၏လှပပြန်ဆိုဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကာကွယ်ရေးဂိမ်းထဲမှာသင်ကထူးခြားတဲ့သတ္တုများပုံသွန်း system ကိုသုံးပြီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်၏အုပ်ထိန်းသူများခေါ်သောရပါမည်။ E ကို
ဒီချစ်စရာဆုံလည်ကာကွယ်ရေးဂိမ်းထဲမှာဆိုးသော '' ကိတ်မုန့် Pirates '' ဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့ကိတ်မုန့်ကိုခုခံကာကွယ်။ drag and drop သင့်ရဲ့တာဝါတိုင်နှင့်ဤ basterds အနိုင်ယူဖို့ mouse ကိုသုံးပါ!
ဒီအသစ်နောက်ခံလူဂိမ်းထဲမှာဆိုးသောခရစ္စမတ် critters မှစန်တာရဲ့အလုပ်ရုံကိုခုခံကာကွယ်။
သင့်ရဲ့ Tesla တာဝါတိုင်နှင့်အတူသင်၏ရာထူးခုခံကာကွယ်။ သငျသညျကိုကလစ်နှိပ်ပါသို့မဟုတ်ဆွဲအဖြစ်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာရန်သူများကိုစောင့်ရှောက်။
နောက်တကြိမ်, သင်ဂျာမန်ကျူးကျော်ဆန့်ကျင်နေတဲ့အစိုင်အခဲကာကွယ်ရေးတည်ဆောက်ခြင်းမှတဆင့်မကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးဒဏ်လက်မှထံမှမိခင်ရုရှားကခုခံကာကွယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ထိုးစစ်ကျော်လွှားရန်မဟာဗျူဟာကွဲပြားခြားနားသောကြိုးစားပါ။ သင်သည်သင်၏အဆောက်အဦပါဝါဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဤအချိန်ဒီတော့သတိထားပါ whe ဖြစ်
တစ်ဦးကိုအပူတပြင်းနိုင်ငံ၏ကာကွယ်ရေး command ကိုယူဆများနှင့်ရန်သူစစ်သား၏ချဉ်းကပ်အလုံးအရင်းကိုရပ်တန့်? ရဲတိုက်တည်ဆောက်ခြင်းကိုပယ်ဖျက်ဖို့သင့်ရဲ့ကီးဘုတ်ပေါ်ကထွက်ပေါက်ကိုသုံးပါ။
သင့်ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ရန်သူမဆုတ်မနစ်ကြိုးစားတဲ့တိုကျခိုကျမှုကိုမှသူမ၏မျှော်စင်ကိုခုခံကာကွယ်ခြင်းအားဖြင့်မင်းသမီးကာကွယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သင်တက်ရန်သူစစ်သားကောက်နဲ့ screen ၏တစ်ဖက်တစ်ချက်ကသူတို့ကိုပယ်ပစ်ရပေမည်။ အာဏာသက်ဝင်စေဖို့ရိုးရှင်းစွာ corresp ကို select လုပ်ပါ
bloons မျှော်စင်ကာကွယ်ရေး 4
ကျွန်ုပ်တို့၏ Bloon မျောက်သေးလျက်မပါ - သူကဘယ်သူမှမယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့တူခုခံကာကွယ်နိုင်ပါ။ မျောက်ဒီနှစ်အသစ် bloons ၏ပျက်စီးခြင်းအဘို့ရှိပါတယ်သစ်ကိုအဘယျသို့ tools တွေကိုကြည့်ပါ!
စီ၏ဒုံးကျည် command ကို, ဒါပေမယ့်အတော်လေးမတူ။ ဒီအေးမြ shoot'em တက်ဂိမ်းမှစာရေးက In-ဂိမ်းသင်ခန်းစာတဆင့်သွားကြဖို့ပေးဆောင်စေခြင်းငှါ, ဒါ။ ပျော်စရာအလွန်စွဲလမ်းဂိမ်းကစားအများကြီး။
ဒြပ်စင်မျှော်စင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်အယူအဆနှင့်အတူဒြပ်စင်တာဝါတိုင်ပေါင်းစပ်ပြီးတစ်ဦးစိတ်ဝင်စားစရာ TD ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါခဏတစ်ဘို့ဤဂိမ်းကစားနှင့်ကအတော်လေးပျော်စရာပါ! ဒါကြောင့်နှောင့်အယှက်နေသောအချို့သောအမှုအရာ (ထိုမီးစက် charging) ရှိပါတယ်ပေမယ့်သူတို့ကတစ်ဦးမှတစ်ဦးစိန်ခေါ်မှု add
မဟာဗျူဟာကာကွယ်ရေးဂိမ်း '' Glass ကိုခုနှစ်တွင်အဆိုပါမျှော်စင်သည်လည်းအဆိုပါနှလုံး '၌သင်ပထမဦးဆုံးမျှော်စင်တည်ဆောက်ရန်နှင့်ပုလင်းစိတ်နှလုံးကိုနေရာပြီးနောက်သင်ပါတယ်ခုခံကာကွယ်ဖို့ရန်ရှိသည် ...
အလယ်ခေတ်ကာကွယ်ရေးဂိမ်းအတွက်မဟာဗျူဟာနှင့်ပစ်ခတ်မှု၏ရောနှော။ ကျူးကျော်လာတဲ့သင်္ဘောများမှသင်၏မြို့ခုခံကာကွယ်။ နစ်မြုပ်သူတို့ကိုမှအမြောက်များနှင့် ammo အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုပါ!
mars 2180 ဂိမ်း
တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်၏ရန်သူလှိုင်းတံပိုးကိုပယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကို Select လုပ်ပါနှင့်ထွက်နေတဲ့တည်ဆောက်။ ထွက်နေတဲ့အစွမ်းထက်အောင်ကြယ်များကိုသုံးပါ။
ဒီမျှော်စင်ကာကွယ်ရေးအတွက်သင်ဖုတ်ကောင်သငျသညျတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်ကျော်ယူပြီးကာကွယ်တားဆီးရမယ်, သငျသညျကိုသာဘဝမှာတဦးတည်းအခွင့်အလမ်းရနှငျ့သငျ youve တယ်အရာအားလုံးနှင့်အတူသင်တို့အဘို့ကိုခုခံကာကွယ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်